Bedelka Apps, SMS, Media, wac Log & Xiriirada ka HTC in Samsung
Bedelka Apps, SMS, Music, Video, Photos, Call Log, Calendar iyo Xiriirada ka HTC in Samsung
Kaliya waxaan helay Galaxy S2, oo aan u suurtagashay in ay u wareejiso hal shay! Waxaan aad u jecel yihiin HD HTC, oo wuxuu ku 'aaminsiiyey' shirkadda taleefanka si ay isugu dayaan S2 ah, halkii ay ka sugi XE dareen ah, oo loo siin dhibaatooyinka Waxaan isagoo, Waxaan jeclaan lahaa in aan ku xayiran aan qoryaha. Shirkadda taleefanka ayaa ii sheegay in ay isticmaalaan HTC nidaameed si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ayaan si aan PC, laakiin xataa waxaan sidaa ma samayn karno sabab qaar ka mid ah, sidaa darteed anigu ma aan samayn karo jidkaas.
Hel ka careysan marka aad wax fikrad ah si ay u gudbiyaan files ka HTC in Samsung? Isdeji. Halkan waa hab in aad gargaar u fidiyaa. Wondershare MobileTrans Ayaa, si gaar ah HTC design in Samsung qalab kala iibsiga ah, awood aad si ay u gudbiyaan SMS, xiriirada, jadwalka taariikhda, photos, music, video, abuse call iyo barnaamijyadooda ka HTC in Samsung oo aan su'aal kasta. Xitaa haddii aad qabto mid ka mid telefoonka gacanta, waxa kale oo aad ku taageeray kartaa telefoonka HTC hore oo soo celin karaa in aad qalab Samsung.
Bedelka HTC in Samsung, dhibaatana si xor ah
Waa mid aad u fudud in ay barnaamijyadooda, warbaahinta, abuse wac, xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah wareejiyo ka HTC in Samsung marka aad taageero ka Wondershare MobileTrans isku aadka.
Bedelka Xiriirada ka HTC in Samsung oo aan ka kaaftoomi kasta.
Copy-ada, sawirada, music video iyo in qalabka Samsung u riyaaqayaa iyo ciyaaro.
Farriimaha qoraalka iyo jadwalka dhaqaaq in ay kuugu yimaadaan marka la isticmaalayo qalab Samsung ah.
Dib aad HTC in computer iyo celin doonaa qalab Samsung dambe.
La jaan qaada badan oo HTC iyo qalabka Samsung, sida Samsung S3, Note 3, HTC Mid ka mid ah, iwm
Easy, Simple iyo Safe
Just mid click, iyo faylasha oo dhan laga rari doono HTC in Samsung. Ma noqon kartaa fudud.
Nuqul Xiriirada, Apps, iwm
Ma xiriir oo kaliya, waxa kale oo aad tahay inay awoodaan inay nuqul ka barnaamijyadooda, video, jadwalka, SMS, music, abuse call iyo sawiro ka HTC in Samsung.
Waxa uu xogta ka HTC in Samsung, iyadoo aan loo eegayn in sidayaal telefoonka la mid yihiin ama ma.
Kaabta iyo Soo Celinta
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xog gurmad telefoonka HTC in computer ka dibna loo soo celiyo si aad Samsung telefoonka ama kiniin effortlessly. (Version Windows oo keliya ayaa sameeya)
HTC ay taageerayaan oo lagu daydo Samsung
Phone taageerayaan OS
Daydo Phone taageerayaan
Laga soo bilaabo Android 2.1 in Android 4.4 HTC Mid ka mid ah M8, HTC Mid ka mid ah X, waxaan jeclahay oo HTC, HTC ugaar S A510E, HTC A9191 doonayay oo HD, HTC ugaar, HTC HD jecel yahay, HTC HAL V, HTC Droid DNA, HTC dareen Z710E, waxaan jeclahay oo S HTC, HTC PC36100, HTC Explorer A310e , iwm
Laga soo bilaabo Android 2.1 in Android 4.4 Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Note 4, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S, Note Samsung 3, Samsung Fiiro 2, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S Duos, Samsung S4 Mini Duos, Samsung Galaxy Grand Duos , Samsung Galaxy Y, Samsung Galaxy Ace, Samsung GT-I9000, Samsung Galaxy Xcover 2, iwm
Qeybta 1: Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka HTC in Samsung ee 1 Click
Qeybta 2: kaabta Your HTC iyo Soo Celinta in Your Samsung
Si toos ah u gudbiyaan xiriirada, SMS, music, sawiro, jadwalka, abuse wac, barnaamijyadooda iyo video ka HTC in Samsung, waa in aad haysataa laba telefoonada gacanta ee.
Tallaabada 1. Daahfurka Tani HTC in Samsung Data Transfer Tool
Si aan ku bilaabo, rakibi iyo abuurtaan qalab - Wondershare MobileTrans ku on your computer. Suuqa ayaa aasaasiga ah ee barnaamijka waa sida soo socota. Connect aad HTC iyo Samsung la your computer via fiilooyinka USB waqti isku mid ah.
Tallaabada 2. sahlo Phone in Transfer Phone
Riix Phone in Phone Transfer ee suuqa kala aasaasiga ah si ay u gudbiyaan xogta aad ka phone HTC ay u qalab Samsung. Markaas barnaamijka lagu ogaan doono labada qalabka aad ku xiran. Hubi in aad iPhone waa meel ka mid ah. Waxaad isticmaali kartaa "Flip" button in la beddelo meelahooda.
Tallaabada 3. Transfer Xiriirada, Calendar, Music, Video, Call Log, SMS, Photos iyo Apps ka HTC in Samsung Galaxy S3 / S5 / S4 / Note 3
Guudmar ku jira iyo uncheck kuwa aad la rabin. Markaas, riix Start Copy . In wada hadal pop-up ah, waxaad eegi kartaa habka kala iibsiga. Marka way dhamaatay, waa in aad riix OK .
Ma doonaysaa in aad telefoon gurmad HTC marka hore, ka dibna u iibin wax iibsiga ah qalab cusub Samsung? Wondershare MobileTrans Ayaa sidoo kale waa mid ka mid ah kugu habboon.
Tallaabada 1. kaabta telefoonka HTC kombiyuutarka
Ka dib markii socda HTC si Samsung kala iibsiga qalab kombiyuutarka. Connect aad HTC la computer via cable USB aad. Daaqadda aasaasiga ah ee barnaamijka, guji "kaabta Your Phone".
Tallaabada 2. kaabta faylasha HTC si aad u computer ah
Hubi nooca xogta in aad rabto in aad raad raac si aad u computer. Markaas riix Start Copy si aad u hesho si aad u computer-file ah gurmad. Markii geeddi-socodka waa dhameystiran yahay, waxa kale oo aad heli kartaa file gurmad halkan: C: \_ Users \_ Documents Maamulaha \_ \_ _1_698_1 _ \_ _ 1_683_1_ \_ kaabta
Tallaabada 4. dooro Soo Celinta ka Function hayaan
Connect telefoonka Samsung la your computer. On dhinaca kore ee midig ee suuqa hoose, guji Soo Celinta ka hayaan . Doonaa si aad u hanuuntaan in uu furmo suuqa hoose. Dooro lambarka koowaad ee "MobileTrans" oo uu hore u socdo.
Tallaabada 3. Soo Celinta HTC kaabta File in Samsung
Halkan waxa aad ka arki kartaa doorasho xog ah ee aad gurmad faylka. Dooro content in aad rabto in lagu wareejiyo si aad qalab Samsung, iyo cick bilow Copy . Markaas wax kasta waxaa loo sameeyaa.
Demi Data ka iPhone in Samsung
Nuqul Xogta laga Nokia in Samsung
Nuqul Xiriirada ka Android inay Samsung
Top 5 Samsung Kies lagu bedelan karo
Ku rakib / uninstall / Update Kies ee Mac
Isticmaal Samsung Kies si ay u gudbiyaan Files
Music Transfer, SMS, Photos, Video, Calendar iyo Xiriirada ka HTC si iPhone
Samsung Hard Disk Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Samsung HHD
Samsung Recovery Solution, A Software Samsung Waxaad doonaysaa in saar
Bedelka files ka Android inay PC
> Resource > Samsung > Bedelka Apps, SMS, Media, wac Log, Calendar & Xiriirada ka HTC in Samsung